जुन 21, 2021 जुन 20, 2021 by कासिम खान
पढ्नुहोस् अध्याय 3219 उपन्यासको कानून मा अद्भुत छोरा by भगवान पात नि: शुल्क अनलाइन।
भियोलालाई यो पनि थाहा थियो कि डेभको बारेमा धेरै कुरा गर्नाले वातावरण पनि नष्ट हुन्छ, त्यसैले उनले कुनै कुरा गरेनन, तर रातो दाखमद्य मार्भेनको हातबाट लिए र यसलाई वाइनको कागको साथ खोल्न अग्रसर गरे।
चार जनाको परिवारले रक्सीले भरिएको थियो, अवेलाले केक निकाले र मार्भेनलाई भनिन्: "हे पति, तिमी पहिले मैनबत्तीहरू फुकाउँछौ र खाना बनाउँछौ, त्यसो भए खाऊ!"
मार्भेन मुस्कुराइयो र हप्कीयो। यो जन्मदिनको लागि मानक प्रक्रिया हो। यो दिउँसो जस्तो छ र यो अझै राती जस्तै छ।
यो मूलतः सहपाठी र सहकर्मीहरूको भेला जस्तै हो। कुन शहर होईन, भेलाको प्रक्रिया सामान्यतया पहिले र त्यसपछि KTV खानुपर्दछ।
तसर्थ, जब एभिलाले फ्रिजबाट केक निकाले र मैनबत्तीहरू जलाए, मार्भेनले एउटा इच्छा गर्न तयार गर्‍यो र मैनबत्तीहरू फुकाइदियो।
छेउमा Avella पनि उसको लागि जन्मदिनको शुभकामना गायो। उनको आवाज चर्को थिएन, तर ऊ धेरै कोमल थियो। ठूला आँखाहरूसहित, उनी बाहिर गइरहेकी थिइन: "तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना, तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना……"
मार्भेनले एभिलाको गायनमा उनको इच्छालाई बुझे र मैनबत्तीहरू बाहिर फ्याँकिदिए।
पछि, अवेलाले भनिन्: "मेरो श्रीमान्, आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्, म तपाईंको लागि उपहार छु!"
मार्भेनले हप्काए र आफ्नो आँखा बिस्तारै बन्द गरे।
अबेलाले पछाडिबाट एउटा गिफ्ट बक्स निकाली, दुबै हातमा समात्दै, मार्भेनको हातमा राखी, र मुस्कुराउँदै भन्यो: "ठीक छ, आफ्नो आँखा खोल!"
मार्भेनले तल हेरी, र उनको हातमा के थियो वाचक बक्समा परिणत भयो।
बक्समा पत्रहरूको एक सरल रेखा लेखिएको थियो, मार्भेनले एक झलकमा पहिचान गरे, यो पाटेक फिलिप भयो।
उनले अचम्भित रूपमा अवेलालाई हेरे, र भने: "पत्नी, तिमीले मलाई किन यति महँगो उपहार किन किने?"
अवेलाले लाजले जवाफ दिए: "यो महँगो छैन, यसलाई खोल्नुहोस् र यदि तपाईंलाई यो मनपर्दछ भने हेर्नुहोस्!"
मार्भेनले यस प्याकेजलाई हप्कायो र खोलियो, जुन भित्र चुपचाप प्याटेक फिलिप्प नटिलस वाच थियो।
यस समयमा, अवेलाले नम्र भई भने: "पाटेक फिलिपको यो नउटिलसलाई प्रवेश-स्तर शैली मानिन्छ।"
"मैले Emgrand समूह को प्रोजेक्टहरू पूरा गरेपछि र सबै अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रीम भुक्तानहरू व्यवस्थित गरेपछि, म तपाईंको लागि राम्रो टुक्रा किन्छु!"
मार्भनले हतार गर्दै भन्यो: "मेरी असल पत्नी, नटिलसको मूल्य कम्तिमा पनि पचास लाख बढेको छ, हैन?"
"हालको घडीको मूल्य अत्यन्त अपमानजनक छ, त्यसैले भविष्यमा मलाई त्यस्तो महँगो घडी नकिन्नुहोस्। राम्रो मेकानिकल वाच फोनमा समय जति सटीक हुन्छ। ”
अवेलाले हाँस्दै भनिन्, "यो कसरी हुन सक्छ? पुरुषहरू समय नहेर्ने घडी लगाउँछन्। यो मुख्यतया एक प्रकारको स्वभाव हो। आजकल, धेरै होशियार भएका पुरुषहरूको धेरै घडी हुन्छन्, बिभिन्न अवसरहरूमा उपस्थित हुन्छन् र बिभिन्न कपडाहरू मिलाउँदछन्। "
“मैले बिभिन्न घडी पनि छान्नु पर्छ। म भविष्यमा बाहिर जाँदा मेरो श्रीमानलाई चोट पुर्‍याएको चाहन्न, विशेष गरी जब तपाईका ग्राहकहरू धनी मानिस हुन् जसले तपाईलाई घडी पनि लगाउँदैनन् भनेर सधैं देख्छन्। "
"तपाईलाई पक्कै पनि लाग्छ कि मेरी श्रीमती तपाईलाई यो किन्न हिचकिचाउँछिन्!"
जब मार्भेनले यो सुने, उसले केही हदसम्म उत्साहित भएको महसुस गर्न सकेन। उनले मुस्कुराए र भने, "धन्यवाद, पत्नी! मेरी श्रीमती सबैभन्दा विचारशील हुनुहुन्छ। ”
छेउमा भएको भियोलाले जिब्रो सुनेर चकित भए र यसो भन्यो: "हे भगवान्, यस्तो यस्तो घडीको लागि मात्र करिब a० लाख खर्च हुन्छ, के त्यो राम्रो देखिन्छ?"
अवेलाले खुसीसाथ भने: “आमा, यो क्लासिक मोडेल हो। यो चीनमा महँगो मात्र हो, तर यो विश्वभर एकै हो। ”
भियोलाले उनको मुटु छुन् र भनिन्, "यो BMW कार हो जुन कलाईमा लगाईन्छ!"
अवेलाले मुस्कुराइ र भनिन्, "यदि तपाईंले यस्तो भन्नु भयो भने, अझै पनि तपाईंको नाडीमा विलासिता विला छ।”
मार्भेनले गम्भीरतापूर्वक यसो भने: “मेरी श्रीमती। तपाईंले भर्खर हेर्नुभयो, त्यसैले भविष्यमा फेरि नकिन्नुहोस्। ”
अवेला मुस्कुराइन् र भनिन्, "भविष्यमा किन्ने कि नगर्ने मेरो मुडमा निर्भर गर्दछ र म पैसा कमाउन सक्दछु। जे भए पनि, तपाईको राय गणना छैन। "
मार्भेन मुस्कुराइन् र हप्की: "ठीक छ, म तपाईं सुन्नेछु।"
Avela सन्तुष्टि संग भने: "यो धेरै धेरै उस्तै हो!"
बोल्ने काम सिध्याएपछि उनले तुरुन्तै घडी हेरी र मार्भेनलाई भनिन्: “म तिमीलाई यो लगाउनमा मद्दत गर्नेछु। अब देखि तपाई प्रत्येक दिन यो लगाउन कोशिस गर्नुहुनेछ। केही दिनको लागि यो लगाउनु हुँदैन र यसलाई छाड्नुहोस्। ”
मार्भेन मुस्कुराइन् र भनिन्, "मेरी श्रीमतीले मलाई दिनुभयो, अवश्य पनि मैले यो हरेक दिन लगाउनु पर्छ!"
अवेलाले हप्काइन्, र आफ्नो नाडीमा घडी हेरेर, उनले यस्तो उद्गार गरी: “यो राम्रो देखिन्छ! यो कम कुञ्जी र अर्थपूर्ण छ। "
"यो ठूलो सुन घडी भन्दा उच्च देखिन्छ कि एलिट लाई मन पर्छ! पति, यसलाई दूर छैन। जब हामी कन्सर्टमा जान्छौं तिमीले यो लगाउनेछौ! ”
Law विचार "कानून उपन्यास नि: शुल्क अनलाइनमा आश्चर्यजनक छोराको अध्याय २5" मा
जुन 21, 2021 मा 6: 17 AM
म हा गुस्ताडो ला। फोर्मा डे वर् टोडस लस। मोमेन्टोस डे ला वीडा क्वी पास एले प्रोटोगेनिस्टा, वाई एन क्याडा उना डे एलास एना एन्का सिटिआसिअन डे एप्रेन्डीजाजे। ला फोर्टालेजा क्वी ले दा क्रिसर एन अन ओर्फान्टो।
जुन 21, 2021 मा 12: 58 AM
अवेलालाई कस्तो लाग्नेछ जब उनीलाई थाहा लाग्यो कि उनले एमिग्रन्ट ग्रुपमा काम पाएको एक मात्र कारण मार्भन कम्पनीको मालिक भएको कारण हो, उसको परिवारको हजुरबुवाको उपहार।
मार्विनको बारेमा चीजहरू थाहा नदिन उनी यति मूर्ख हुनुपर्छ।
मानिसहरु कुरा गर्छन्, अफवाहहरु बढ्छ ... Avella एक बुलबुला मा बस्छ।
जुन 21, 2021 मा 12: 35 AM
मार्विन आफै यो एक धेरै मायालु व्यक्ति छैन। उसको जीवन असन्तुष्ट र बदलाले भरिएको छ।
उहाँ यी व्यवसाय र अवसरहरूमा जान्छन् तर तिनीहरूलाई के गर्ने वा तिनीहरूलाई प्रबन्ध गर्ने केहि उपाय छैन। ऊसँग उनले राखेका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूलाई कुनै पनि अन्तर्क्रिया बिना नै जान्छन्। हुनसक्छ यो उसको शिक्षाको अभावबाट छ र कसरी व्यवसाय चलाउने।
मार्विनले धेरै डराउने र जादुई गोलीका साथ आफ्नो पक्षमा काम गर्दछ जुन बुढेसकालका लागि मृत्युको डरले उसलाई के चाहिन्छ भनेर प्राप्त गर्छ।
मार्विन मानिसहरूलाई मार्न र नष्ट गर्न एक सैन्य नेताको रूपमा राम्रो प्रयोग हुने थियो
जुन 21, 2021 मा 12: 25 AM
अवेला, गहिरो तल मार्विनलाई लाज लाग्छ यद्यपि उनी आदरयोग्य छ किनकि उसले आफ्नो आमा बुबाको हेरचाह गर्छ र चार जनाको परिवारको पालनपोषण गर्न भाग्यशाली छ। Avela उनको हजुरबाको इच्छा को लागी एक आज्ञाकारी चिनियाँ केटी हो। आश्चर्य छ कि उसको हजुरबुबाले उनलाई मारविनको बारेमा के बताउनुभयो।
किन हजुरबुबाले परिवारको कसैलाई मार्विनको सम्पदाको बारेमा बताउनुभएन। Avella मार्भिन के को सराहना गर्दछ तर उनको ख्याल वा प्रेम गर्दैन वा उनको चुम्बन गर्न वा s3x छ।
२०-२० बीचमा दुई व्यक्ति सँगै बस्न र चार बर्षसम्म एस 20 एक्स नभएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
मार्विनले आफ्नो पहिचान जोगाउन Avela प्रयोग गर्दछ। धेरै हिसाबले ऊ छली व्यक्ति हो। थगको एक बिट मूल रूपले फार्मास्यूटिकल व्यवसाय चोरी गर्दछ र फेरी टेरेसा चलाउनको लागि एस्कॉर्ट व्यापार चोर्दछ।
ऊ आफ्नो अद्वितीय शक्ति संग एक बदमाश छ।
गहन ज्ञानको पुस्तक पत्ता लगाउने र ग्रहण नगरी ऊ केहि पनि हुने छैन।
जुन 20, 2021 मा 9: 40 पीएम
कृपया अपडेट गर्नुहोस्